Guddoonka baarlamanka federaalka ah oo u muddeeyey doorashada hoggaanka dalka badhtamaha July. – Radio Daljir
Muqdisho, 16 May – Afhayeenka wakiillada DFKM Soomaaliya Shariif Xasan Sh Aadan ayaa maanta magaalada Muqdisho ka sheegey in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhici doonto 15ka July ee sannadkan.
Guddoomiye Shariif Xasan Sh Aadan oo maanta shir jaraa?id ku qabtay magaalada Mudisho ayaa sheegey xalka kaliya ee xilliga kala guurka ah iyo guud ahaan marxaladda Soomaaliya in uu yahay in ay doorashadu dhacdo bisha July ee sannadkan 2011-ka, maadaama xilliga dowladdu uu ku egyahay bisha August ee sannadkan.
Shariif Xasan Sh Aadan, afhayeenka baarlamaanka DFKM Soomaaliya waxa uu ka falceliyay hadalkii ra?iisal wasaare Farmaajo uu dhawaan sheegey ee ahaa in baarlamkaanka imika ee dowladdu aanuu ahayn mid sharci ah oo wax dooran kara, waxana uu guddoomiye Shariif taasi beddelkeeda sheegey in baarlamaanku uu xaq u leeyahay in uu doorto hoggaanka dalka, isla markaana imika la joogo xilligii ugu habboonaa ee waxqabadka baarlamaan ee umuurtaasi ku aaddan.
Su?aal ay warfidiyeennadu madasha shirkaas jaraa?id ku waydiiyeen guddoomiye Shariif Xasan Sh Aadan oo ahayd waxa uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya madaxweyne Shariif Sh Axmed ayuu kaga jawaabay in aanuu jirin khilaaf labadaas masuul u dhexeeya, balse is afgaranwaagu uu ka taagan yahay xilli korodhsiga baarlamaanka.
Khilaafka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra?iisal wasaaraha oo isku dhinac ah ayaa ku sii dhex fidaya golayaasha DFKM Soomaaliya, halka dhinaca kalena ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya xoogagga nabad ilaaleyaasha Amisom ay horumar ka samaynayaan dagaalka ay kula jiraan Alshabaab.